Masoja eUS: ndeapi masero ese?
El United States Mauto Iye ari pamusoro pekudzidzira bazi remauto renyika ino uye anozivikanwa nekuve neanotevera mamishini.
Chengetedza runyararo uye kuvimbika yeUnited States nekudzivirira nekudzivirira nzvimbo dzese dzinogarwa
Ipa rutsigiro rusingaperi kune ese marongero enyika
Sangana nezvose zvinangwa zveUnited States
Fadza nyika dzino kuisa rugare rwenyika yeAmerica panjodzi
1 Iwo mauto eUnited States
1.2 Vasina kutumwa vakuru
Iwo mauto eUnited States
Mauto General 1
Mukati meuto reUS, vakuru vari pamusoro peketani. Mukati meMauto mukuru mukuru munharaunda mune mana anofambira mberi akakwirira masimba emasimba.
Mauto vakuru vemauto kazhinji vanotanga kubrigadier kana imwe-nyeredzi nhanho uye kuwanda huwandu neane nyeredzi ina.
Pakati pane zvinzvimbo zvaMajor General naLieutenant General. Mauto commandos anotungamira uye avo mabasa anoenderana neanowirirana iwo muhoro zvinodiwa.
General zvakare ari pakati pevakuru vepamusoro. Mutungamiriri wemauto eU.S. Army anowanzo kuve mukuru zvakafanira kugamuchirwa nezvidzidzo zvese uye hunhu hwakakosha hunodiwa.
Vakuru vanotonga nzvimbo huru dzebasa, senge US Central Command, nebasa reMiddle East kana dzimwe nzvimbo dzakananga seinodiwa neUnited States Mauto Sisitimu.
Uye zvakare, vakuru vemauto vanogadzwa nguva nenguva kuve masachigaro eVakabatana maChigaro evashandi.
Mutariri wemirairo yepamutemo inoenderana nemhando dzechikamu. Iwe une mikana yekufambira mberi kusvika kumatunhu epamusoro chero bedzi iwe uchisangana nechidzidzo uye hunyanzvi zvinodiwa zvemauto zvinodiwa.
Ivo vari pamusoro pekupa mapoka kana zvikamu zvemauto kuitira kuti vave nechokwadi chekushandiswa kwakakodzera kweiyo nzira dzechiuto zvakafanira.
Inoonekwa seyepamusoro soro ine chekuita nevakuru, ine basa rekushandisa kudzora, kuraira uye manejimendi munzvimbo dzechiuto nemabharaki.
Basa ravo guru nderekuraira mabhatani emauto kana kuve pamberi pemauto.
Icho chaicho chinotora chikamu chemauto eUS kana zvasvika pamabasa echiuto, vatungamiriri vane basa rekushandisa kuraira, vachiziva mamiriro ezvinhu, vachitungamira mauto uye nekuchengetedza mauto eUnited States muhurongwa hwakazara.
Ivo vane basa rekuraira makambani emauto, vatungamiriri vanoonekwa seve chinzvimbo chepamusoro mukutungamira kwepakati.
Masoja junior chinzvimbo cheUnited States Mauto Echisimba, anozivikanwawo seChipiri Lieutenant muAmerican Mauto Echisimba.
Vasina kutumwa vakuru
Sajeni Ivo vanoonekwa seiri yepakati kuraira kwemauto eU.S. ari pakati pevakuru nemauto.
Iwo makuru mabasa evasajeni munzvimbo yavo yemauto ndeyekuti kurairwa, kutonga uye kudzidziswa kwevari pasi pavo. Iwo maSajeni, pamwe nevakuru vakasiyana vemauto, vanofanirwa kuratidza positivism uye nerutsigiro rwakanaka pakuita hutongi hwemauto.
Sajeni Major wemauto
Raira Sajeni Major
Sajeni Chekutanga Kirasi
Sajeni Kirasi Yechipiri
Koporo ine chinzvimbo chepamusoro kupfuura masoja uye chinangwa chake ndechekutarisa hunhu hwakanaka hwemasoja.
Mamwe matavi eUnited States Army anosanganisira:
Mauto eVarwi Vemabhiza
Mauto eUchenjeri Corps
Anti-Mhepo Zvombo Zvombo
Akakosha Mauto Chombo
Civil Services Chombo
Akakosha matavi eUnited States Mauto
Mauto Medical Dhipatimendi
Chiremba Service Corps
Mauto Nyanzvi Chiremba Corps
General Mutumbi weVatongi neMagweta
Izvi zvave zvirizvo, tinovimba iwe wakafarira kuongorora uku kwemauto eU.S. uye kana uine mimwe mibvunzo unogona kutisiira mhinduro pazasi.
Zvinodudza muchiPutukezi: madudziro uye mienzaniso
Zvibatanidza zveGerman: runyorwa uye mienzaniso
kudzidziswa » tsika nemagariro » Mauto eU.S.
1 Mhinduro pa «US Mauto Mauto»
Mbudzi 5, 2018 pa2: 25 pm